Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Goncalo Guedes Childhoood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Goncalo Guedes na-egosiputa Eziokwu banyere Nwatakiri Nwatakiri ya, Oge Ochie, Ezin’ulo, Ndi nne na nna, Nwunye, Web, Net Worth na Personal Life.
N'okwu ndị dị mfe, nke a bụ akụkọ banyere Ndụ Ndụ Onye ndụ, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị dịkwuo mma, lelee oge ọ bụ nwata rue ebe a na - eto eto - nchịkọta zuru oke nke Goncalo Guedes 'Bio.
Goncalo Guedes 'akụkọ ndụ.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ntụgharị winger na ụdị ọrụ dị iche iche. Agbanyeghị, ọ bụ naanị obere bọọlụ aficionados gụrụ Goncalo Guedes ' Ihe omuma nke bu ihe omuma banyere ihe omuma ihe na ndu ya. Ugbu a, Na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Goncalo Guedes Akụkọ Nwata:
Iji bido, Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes a mụrụ na 29th ụbọchị nke ọnwa 1996 na obodo Benavente na Portugal.
Ọ bụ otu n'ime ụmụ 2 amụrụ nne ya amachaghị na nna ya nke aha ya bụ Rogério Guedes.
Otu n'ime foto izizi mara nwata nke Goncalo Guedes.
Nwa okorobịa Goncalo tolitere na ebe omumu ya na Benavente na Portugal tinyere nwanne ya nwoke nke okenye na nwanne ya nwoke - Joao Maria - bụ onye a kọrọ na ọ dị afọ abụọ karịa ya.
O toro na Benavente, Goncalo amachabeghị ije ije mgbe ọ malitere ịgba bọl. Enweghị mmasị na ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Ọ na-atọkwa ya ụtọ iburu ya bọọlụ abụọ mgbe o mechara mụta ịga ije.
Goncalo Guedes Ezigbo Ezinụlọ:
N'oge a, ọtụtụ ga-amalite ịjụ etu Goncalo si hụ bọọlụ n'anya, ọkachasị mgbe amaara obodo ọ tolitere maka ịlụ ọgụ ịlụ ọgụ karịa bọọlụ.
Ọ dị mma ịmara na Joao (nwanne Goncalo) malitere ịgba bọl mgbe ọ dị obere.
N'ihi ya, ọ bụ ihe dị mma na agụụ Joao maka ịgba bọl ga-emetụta nwanne ya nwoke nke nta. Kedu ihe ọzọ, nne na nna Goncalo Guedes bụ ndị na-anụ egwuregwu na-enweghị nsogbu na ịhapụ ụmụ ha ka ha gbaa bọọlụ n'okporo ámá na n'ọgbọ dị n'azụ ụlọ ha.
Foto a na - eto eto nke obere nwa Goncalo Guedes na otu n'ime ndị mụrụ ya.
Otu ọrụ bọọlụ bidoro maka Goncalo Guedes:
Ka ọ na-erule oge Goncalo dị afọ 5, ọ malitere soro Joao gaa ụlọ akwụkwọ bọọlụ na Ribatejo ebe nwanne m nwoke nke okenye zụrụ azụ na nchekwa ihe.
Mgbe ụmụnne ya nọ ya, Goncalo nwere ike ịlele naanị n'ihi na enweghị ụdị otu egwuregwu maka ụmụaka ndị ọgbọ ya.
Agbanyeghị, mgbe enwere asọmpi na-achọghị ka ewepụta kaadị njirimara, onye nchịkwa otu ahụ nyere ohere maka ụmụaka na-eto eto iji gosipụta onwe ha, ohere Goncalo mere nke ọma ịbawanye.
N'ezie, o nwere ikike ịgba bọọlụ mara mma nke na ndị maara nna ya kpọrọ oku na nwatakịrị ahụ kwesịrị ịmalite ọrụ na egwuregwu na Benfica.
Ọ bụ naanị 5 afọ ma ọ nwere ike ịsọ mpi na ụmụaka ndị 2 afọ karịa ya.
Afọ mbụ nke Goncalo Guedes na Nlekọta Ọrụ:
N'ị Hea ntị n'olu nke ọtụtụ, nna Goncalo mere ike ya niile iji hụ na ihe egwuregwu bọọlụ malitere ọzụzụ na Benfica mgbe ọ dị afọ 6.
Agbanyeghị, ọ bụ rue mgbe afọ 3 gachara ka 9 afọ ahụ wee bụrụ akụkụ nke usoro ntorobịa Benfica.
Foto nke football prodigy 4 afọ mgbe ọ ghọrọ onye ọrụ gọọmentị nke usoro ntorobịa Benfica.
Ọganihu nwatakịrị ahụ site na klọb na-enweghị nsogbu. Ọ malitere na Benfica's B na Eprel 2014 wee bido ịmalite ịpụta ọhụụ maka ndị otu egwuregwu bọọlụ ọnwa mbụ ka ọnwa October gachara.
Goncalo Guedes Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'elu ọrụ Goncalo na Benfica, o meriri Atletico Madrid na Septemba 2015 ka ọ bụrụ onye na-eto eto Portuguese nke na-agbachitere Njikọ Njikọ ebe ọ bụ na Cristiano Ronaldo.
Hụ onye bụ 19 afọ mgbe ọ malitere iji ya tụnyere Ronaldo.
Ọrụ dị egwu dị otú ahụ n'etiti ọrụ ndị ọzọ dị egwu mere ka ọ daa na radar nke PSG nke ọ binyere aka na ya na 2017.
Agbanyeghị, o nwetara oge ịgba egwu n'ihi na ọnụnọ nke ndị egwuregwu ọhụụ dịgasị ka Julian Draxler na Angel Di Maria ọhụma na ọ nọdụrụ n’elu oche.
Goncalo Guedes Biography - Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ụzọ dị mma, PSG nyere Goncalo na Valencia na mbinye ego na 2017. Ndị France na-ejikarị ya eme ihe ma kwụọ ụgwọ ntụkwasị obi ha nwere na ya site na ị nweta ihe mgbaru ọsọ na ịnata otuto site na ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu ụwa maka oge mmalite ya.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na akụkụ ndị Spain mere nkwekọrịta ya na-adịgide adịgide na 2018.
N'ịgba ọsọ ọsọ n'oge a na-edepụta bio, Goncalo emeela ka ọnọdụ ya dị na Valencia site na iduga klọb ahụ n'ọtụtụ mmeri gụnyere mmeri Barcelona iji merie Final Copa del Rey nke 2019.
A maghịkwa na ọ bụ onye na-asọ oyi dị egwu na ọrụ mba ụwa dịka o mere ike ya iji nyere mba ya aka Portugal meriri agba egwuregwu mbu ha nke UEFA Nations League n’afọ 2019.
Onye uwe ojii ahụ mere nke ọma iji gosi na ọ bara uru site na Benfica ruo Valencia na mba ụwa.
Ọnye na-bụ Goncalo Guedes 'Nwunye?
N'ịga n'ihu na ndụ ịhụnanya, ọ nọghị na mmekọrịta alụmdi na nwunye dịka nke June 2020, agbanyeghị, o nwere enyi nwanyị mara mma nke aha ya bụ Madalena de Moura Neves.
Duo na-akpa kemgbe oge Goncalo abụghị onye ọ bụla na Benfica ruo mgbe ọ bịara mara.
Kedu ihe ọzọ, enyi nwanyị Goncalo Guedes bụ onye gụsịrị akwụkwọ na njikwa na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na-egbochi ọtụtụ mmekọrịta ha na-enwe anyaụfụ n'anya anya.
Zute Goncalo Guedes 'enyi nwanyị Madalena de Moura Neves.
Goncalo Guedes Ndụ Ezinụlọ:
You maara na enyi nwanyị Goncalo Guedes abụghị naanị onye dị ya nso? Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndị ezinụlọ winger na-amalite na nne na nna ya.
Banyere Goncalo Guedes Ndị nne na nna:
Rogério Guedes bụ nna nke ọkachamara na football. Enweghị obere ihe ọmụma gbasara ụdị Job ọ nwere n'oge nwata Goncalo. Ka o sina dị, anyị maara na ọ na-ewere oke kredit ya maka mmeri nke winger na-arụ ọrụ football.
Ọ bụ Rogério chụpụrụ nwa okorobịa Goncalo gaa ọzụzụ. Obi dị ya ụtọ na ọ dịrị ndụ ndụ nke nraranye nye nrọ nwata. Na mgbakwunye, ọ na-enwe obi ụtọ mgbe ọ bụla nwa ya nke ọdụdụ ghọrọ.
O doro anya na onye kasị mara nne na nna Goncalo Guedes bụ nne ya na-ahụ n'anya. Ee, Winger anaghị ekwu okwu banyere ya mana ọ na-ekwughi na ọrụ ya na mmepe ya enweghị atụ.
Zute Goncalo Guedes Ndị nne na nna.
Banyere ụmụnne nwanne Goncalo Guedes:
dị ka anyị mere nke ọma ịkpọtụrụ na mbụ, ndị nne na nna Goncalo Guedes nwere nanị ụmụ abụọ bụ winger na Joao (nwanne ya nwoke nke obere).
Joao nwere mmasị na football dị ka onye na-eche nche. Agbanyeghị, ọ ghọghị ọkachamara bọọlụ dịka Goncalo onye ọ hụrụ n'anya na onye na-akwadoghị.
Goncalo Guedes na nwanne ya nwoke Joao.
Banyere ndị ikwu Goncalo Guedes:
Ewezuga ezi ezinụlọ nke onye winger, enweghị ndekọ ọ bụla gbasara mgbọrọgwụ ezinụlọ ya na nna nna ya. Dika odi, ndi nne na nna ya, ndi nne na nna ya na ndi nne na nna ya amaghi. N'otu aka ahụ, winger ka ga-ekpughe eziokwu banyere ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Goncalo Guedes Ndụ Nke Onwe:
Isnye bụ Goncalo gafere football na kedu ụdị ọdịdị agwa ya si pụọ na egwuregwu? Eziokwu ndị dị a doaa ka ndị enyi na ezinụlọ nwere iji gosipụta ụdị mmadụ ọ bụ?
Iji malite, àgwà ya yiri nke ndị mmadụ nke Zodiac Sign bụ Sagittarius.
Winger dị ala n'ụzọ ụwa, nwee ọgụgụ isi nke mmụọ, ịdị jụụ ma na-emenye ụjọ. Ọ hụrụ njem, igwu mmiri, iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa, n'etiti ndị ọzọ nwere mmasị na ntụrụndụ.
Nwere ike ịhụ ya ka ya na ezinụlọ ya na ndị enyi ya na-ekpori ndụ?
Goncalo Guedes Web - Net Net na Otu o si emefu ego ya:
Banyere otú ndị na-agba ọsọ ụkwụ si emefu ma na-emefu ego ya, o nwere atụmatụ ruru $ 5 nde n'oge edepụtara akwụkwọ akụkọ a.
Otutu n'ime akụnụba ndị a nwere mmalite sitere na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta site na ịbụ onye ọkpọ ụwa.
O ruru $ 5 dị ka nke June 2020.
Na mgbakwunye, bọọlụ bọọlụ na-enweta ego na-akwụ ụgwọ site na nkwado. Agbanyeghị, ọ naghị ebi ndụ okomoko nke ndị ọgba bọọlụ bara ọgaranya. N'ezie, ọtụtụ ndị nọ nso na winger nwere ike ịgba akaebe na ọ hụrụ ndụ ndụ ọhụụ n'anya karịa okomoko na-enweghị isi.
Goncalo Guedes Eziokwu:
Iji mechie akụkọ nwata anyị na Goncalo Guedes na akụkọ ndụ anyị, anyị chere na ọ dabara iji gosipụta ihe amachaghị ma ọ bụ Eziokwu banyere winger.
Eziokwu # 1 - Nkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa n'ihe metụtara Ala Citizen Portuguese:
Kwa Afọ € 5,832,960 $ 6,623,617 £ 5,208,000
kwa ọnwa € 486,080 $ 551,968 £ 434,000
Kwa Izu € 112,000 $ 127,182 £ 100,000
Kwa .bọchị € 16,000 $ 18,169 £ 14,286
Kwa elekere € 667 $ 757 £ 595
Kwa Nkeji € 11 $ 12.7 £ 9.9
Sekọnd € 0.18 $ 0.2 £ 0.16
Na-atụle ụgwọ ọnwa ya na Nkezi Citizen:
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Goncalo Guedes'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
You Maara?… Ndị Portugal na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa nke € 2,750 ga-arụ ọrụ opekata mpe afọ iri na anọ na ọnwa abụọ irite € 486,080. Nke a bụ ụgwọ Goncalo Guedes (kwa ọnwa) na Valencia.
Eziokwu # 2- Fim FIFA:
The obosara player nwere a ngosi n'ozuzu FIFA fim nke 82 ihe. Ego dara ogbenye nwere ihe jikọrọ ya na obere ngosipụta ya n'oge oge 2019/2020.
Ọ ga - abụ naanị oge tupu ọ bulie egwuregwu ya iji nweta ogo ya zuru oke ma ọ bụ ihe 88.
Ihe ngosi 82 ​​doro anya na ọ dịghị mma maka onye ọkpụkpọ nke ọkwa ya. Ọ mere?
Eziokwu # 3- Trivia:
Enwere ihe karịa 1996 karịa ịbụ afọ ọmụmụ nke Goncalo. Ọ bụ otu afọ ahụ ka e wepụtara ụdị izizi nke asụsụ mmemme Java. 1996 bụkwa afọ nke ihe nkiri dịka Independbọchị Mwere Onwe na Mission Enweghi ike ịkụ sinima.
Eziokwu # 4- forhụnanya maka Anụmanụ:
Winger nwere ihe maka nwamba ọkachasị nke ndị dịkarịsịrị ụdị. Enwere ike ịhụ ya ka ọ na-agbado cat na foto dị n'okpuru. O doro anya na pusi na-enwe udo na onye ọkpụkpọ nwere udo ma nwee obi abụọ ọ bụla n'anya ya.
Na echiche nke abụọ, nke a bụ ụdị nwa agụ owuru ma ọ bụ naanị nwamba?
Iji mee ka ndụ dịkwuo mfe, anyị akwadebewo tebụl a nke na-enye ozi dị nkenke banyere Goncalo Guedes Biography Facts. N'ebe a, ị nwere ike nweta ngwa ngwa gbasara ndị bọọlụ Portuguese.
Aha n'uju Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
aha otutu Ducati
Ụbọchị ọmụmụ 29th nke November 1996
Ebe amụrụ onye Obodo Benavente na Portugal
Nna Rogério Guedes
nne N / A
Nne Joao Maria
enyi nwanyị Madalena de Moura Neves.
Net bara uru Nde 5 (2020 Figures).
omume ntụrụndụ Travelga njem, igwu mmiri ma soro ndị ezinaụlọ na ndị enyi nọrịa.
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ ihe mmụta ederede a na akụkọ ndụ Goncalo Guedes. Na Lifebogger, anyị lekwasịrị anya n'inye akụkọ ụmụaka na akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ tinye okwu na igbe dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya n'isiokwu a.